Manaingo sy manazava ny endrikao amin'ny fampiharana Adobe vaovao: Photoshop Fix | Androidsis
Omaly naneho hevitra izahay fampiharana roa vaovao tonga amin'ny Android ary izany dia mamela antsika hanao zavatra mahatalanjona. Indrindra amin'ny tranga Comp CC, fampiharana iray izay azonao atao ny manisy endrika amin'ny efijery amin'ny findainao, mba hahafantaran'ny programa azy ireo sy hisarihany azy ireo tsara ho anao, ka raha ny tena izy dia manokan-tena bebe kokoa amin'ny endrika ianao fa tsy amin'ny lafiny madio kokoa, izay mety hitovy amin'ny sary.
Adobe dia mitady izany rehetra izany raha mikasika ny fampiharana ho an'ny famolavolana sary sy famerenana trano ary raha omaly dia nahafaly anay ireo fampiharana 2 vaovao ireo, ankehitriny dia manana iray hafa eo am-pelatanany izay efa navoaka tao amin'ny Google Play Store. Adobe Fix no voafidy ary rindranasa iray izay anisan'ny mampiavaka azy sasany, misongadina ny fahafahany manazava sy manatsara ny tavanao miaraka amina fitaovana tsotra vitsivitsy. Andao hojerentsika izay manokana momba an'ity fampiharana ity izay afaka manatsara ireo sary ampiasainao amin'ireo mombamomba anao samihafa amin'ny tambajotra sosialy sy fampiharana fandefasan-kafatra.
1 Tsotra sy mahery vaika ny fampiharana azy
2 Mikorisa manodidina amin'ny Fix
Tsotra sy mahery vaika ny fampiharana azy
Mamela ny Adobe Photoshop Fix famerenana sary sy famerenana amin'ny laoniny ny sary amin'ny fomba tena tsotra, nefa miaraka amin'izay dia matanjaka be. Azonao atao ny manitsy, milamina, mamaly, manazava ary manaova karazana fanovana sy fanitsiana hafa hanana an'io fijery mahafinaritra io izay miavaka amin'ireo tambajotra sosialy sy fampiharana fandefasan-kafatra ireo.
Fix mampiasa ny famandrihana maimaim-poana amin'ny Adobe Creative Cloud hananana ny zava-boary rehetra nataonao tamin'ny fitaovana rehetra tadiavinao. Midika izany fa fampiharana maimaim-poana izy io ary tsy mila sarany isam-bolana, noho izany dia aseho i Adobe ho iray amin'ireo orinasa manolo-tena indrindra hanana ny fanovana sary tsara indrindra sy fitaovana ho an'ny famoronana lasa tena ilaina.
ny Photoshop Fix fiasa ireo dia:
Manafoana tarehy: afaka mamorona tsiky lehibe kokoa ianao, mampihena ny takolaka na manitsy ny tarehy hafa amin'ny fomba miavaka
Liquefy- Manosika, misintona, mihodina, mibontsina na mamerina mamorona endrika ny faritra rehetra amin'ny tarehy mba hamoronana karazana vokatra rehetra
Amboary ary petaho- Ny tsy fahalavorariana dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny atiny avy amin'ny faritra mifanila aminy
Ataovy mitovy tantana- Manalefaka na manamafy ny hoditra, ny endrika na sary hafa
Mihamazava sy mihamaizina: azonao atao ny manampy na manala hazavana amin'ny faritra manokana amin'ny sary
Hay betsaka ho an'ny fanovana ary fanitsiana sary hanovana ireo lafiny ifotony toy ny loko, ny loko, ny fanitsiana vignette na manjavozavo, ary manampy ireo voalaza etsy ambony ireo mba hanolotra andiana fitaovana hahafahanao mamorona ireo vokany lamaody toy ny fanondrotana kely ny masonao.
Ny iray amin'ireo kalitaon'ny Photoshop Fix dia ny santionany ananany ho an'ny famerenana mamorona sy sary. Misaotra azy ireo fa afaka manakaiky ireo dingana tokony harahina ianao avereno amboarina ireo sary sy tarehy ireo amin'ny fomba matihanina somary matihanina, na dia misy fetran'ny fitaovana aza.
Mikorisa manodidina amin'ny Fix
Manamboatra mampiasa a interface tsara izay miasa toy ny pesona ary izay ny bokotra FAB dia miakatra dingana afovoany. Eo amin'ny farany ambany isika dia hanana fitaovana fototra indrindra hanapahana, hanitsiana, hametrahana liquefy, hahitsy ary malama. Fa raha mitady ilay misy ifandraisany amin'ny famerenana indray ny tarehinao ianao, dia tokony hampifangaro tsara ny safidy tsara indrindra.
Avy amin'ity fitaovana ity dia hiseho alohan'ny safidy maromaro toy ny warp, swell, pinwheel ary tarehy. Mandeha mifanatrika isika ary ireo teboka fanaraha-maso isan-karazany mifandraika amin'ny maso roa, ny orona, ny takolaka, ny vava ary ny saokany dia hiseho eo amin'ny endrik'ilay sary feno entana. Safidintsika ny teboka fanaraha-maso an'ny maso roa, ary misy andiana safidy miseho mitsingevana hanova ny habeny, ny fironana, ny haavony ary ny sakany. Andramo ny habeny, dia hahazo ianao fisotroana izay hanova ny haben'ny maso hahatonga azy ireo ho lehibe kokoa na kely kokoa. Ny sary etsy ambany dia mampiseho ny mety an'ity fampiharana ity sy ny fahaizana manova ny tarehy nefa tsy very ny votoatin'ny voalohany.
Una fitaovana tena mahaliana amin'ny fanovana sary sy fanatsarana tarehy izay anananao maimaimpoana ao amin'ny Google Play Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Manazava sy manatsara ny endrikao amin'ny fampiharana vaovao mahatalanjona avy amin'ny Adobe antsoina hoe Photoshop Fix
Android dia manjaka amin'ny tsenan'ny smartphone eran-tany miaraka amin'ny tsenan'ny 88%